I-imeyili ogaxekile ne-intanethi inikeza abaduni ngokufinyelela kalula kuma-computer akho kanye nolwazi. Ngomzuzwana noma amabili, ukufinyelela kwakho kunciphile okusho ukuthi awukwazi ukuvula, wabelane noma ususe noma yimaphi amafayela akho. Abaduni bakucela ukuthi ukhokhele isihlengo ngaphambi kokuba uphinde uthole ukufinyelela kumakhompyutha wakho siqu. Yiqiniso, kunenqwaba ye-software, izinhlelo, namathuluzi ongayilanda ukuze unciphise inani lokuhlaselwa kwe-intanethi - blue book value for buses. Iningi le-software nezinhlelo zivimbela ukuhlaselwa kwegciwane ne-malware, kodwa ayikwazi ukugcina uhlelo lwakho lwekhompyutha luphephile wonke. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ungathembeli kula mathuluzi futhi ubheke ezinye izindlela.